On1.click | တောင်ပေါ်စာ
... ိုးဖြစ်ပြီး အာရှတိုက်၊ ဟိမဝန္တာတောင်တန်း၊ မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ၊ နီပေါ...
Near Kupup(14000 ft), Sikkim, India. Subspecies nemoricola in breeding plumage.
တောင်ပေါ်စာ (Leucosticte nemoricola) သည် စာကလေးမျိုးနွယ်ဝင် ငှက်တမျိုးဖြစ်ပြီး အာရှတိုက်၊ ဟိမဝန္တာတောင်တန်း၊ မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ၊ နီပေါ၊ ရုရှားနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ တိဗက်တို့တွင် တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ယင်းငှက်ကို မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
↑ BirdLife International (2012). "Leucosticte nemoricola". IUCN Red List of Threatened Species 2012. IUCN. old-form url